An eco-friendly tropical waterfront home thatsafusion of tropical & modern architecture, the spaces are layered on top of one another, interspersed with Roof Gardens and Ponds that insulate spaces below and create deep reveals, which along with the wide roof eaves provide ample shading. Natural tactile materials were selected to createaquiet backdrop, the focus being on the abundant views of the waterway and lush tropical garden that surround the house.
ဤ သဘဝပတ်ဝန်ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကိုက်ညီသည့် (eco-friendly) သစ်တောစတိုင်နှင့် ခေတ်မှီသည့်စတိုင် ပေါင်းစပ်သည့် ရေနှင့်နီးကပ်သည့် အိမ်သည် ခေါင်မိုး၌ရှိပန်းခြံလေးနှင့် ရေအိုင် ရှိပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သည့် ခေါင်မိုးသည် အရိပ်ပေးပြီး အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငြိမ်းချမ်းသာယာစေပါသည်။ အနောက်ခံအတွက် သဘာဝဆန်သည့်ပစ္စည်းသုံးပြီး ရေနှင့်နီးကပ်သည့် အိမ်ကို ပတ်သည့် ပန်းခြံရှုခင်းမှာ အဓိက အာရုံစိုက်မှုရှိစေသည်။
Экологичный тропический дом с видом на водоем представляет собой слияние тропической и современной архитектуры, где зоны наслаиваются одна на другую; с садом и ручейками на крыше, которые отделяют нижние зоны и в тоже время, вместе с широкими парапетами, создают достаточное затенение. Натуральные тактильные материалы подобраны для создания уютного фона, с акцентом на роскошный вид водоема и буйный тропический сад вокруг дома.